Sidee lagu ogaan karaa kalluunka ay kala baxayaan biyaha Soomaaliya kallumeysatada ajaanibta? – Bandhiga
Sidee lagu ogaan karaa kalluunka ay kala baxayaan biyaha Soomaaliya kallumeysatada ajaanibta?
Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeesay muddo30 sano ah kadib waxaa magaalada Muqdisho ku saxiixday heshiis si daah furanloogu bixinayo shatiyo kalluumeysi oo la siinayo iskaashatooyin ka soo jeedadalka Shiinaha.
Wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda, Cabdillahi Bidhaan Warsame ayaa sheegay in shatigan la siiyay iskaashatada COFA ee dalka Shiinaha oo leh 31 maraakiib ah, waxaana lagu bixiyay lacag dhan hal milyan oo doolar-ka Mareykanka ah.
Wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka ayaa sidoo kale sheegtay in Iskaashatada COFA ay saxiixday in ay la bixi karto kalluunka Tuna oo kaliya ah.
Sidee lagu ogaan karaa kalluunka ay la baxayaan?
Inkastoo Dowladda Federaalka ee Soomaaliya aysan awood u laheyn la socodka maraakiibta ka kalluumeysta badaha Soomaaliya iyo ammaanka badaha, hadana dowladdu waxa ay sheegtay in shirkadahaasi la siiyay shatiyada markasta loo yeeri karo.
”Inta awooddeenna ah waan dadaali doonnaa, waxaan ku ogaan karnaa heshiiskii aan la galnay oo dhigaya in marka aan doonno aan ugu yeeri karno dekedaha Muqdisho iyo Bosaaso, si aan u ogaano nooca kalluun ee aan u fasaxnay iyo inta uu la egyahay”. Sida uu sheegay wasiirka kaluumaysiga iyo khayraadka badda ee Soomaaliya Cabdillahi Bidhaan Warsame.
Dowladaha iyo Shiinaha ee la siiyay shatiyada kallumeysiga Badda Soomaaliya ayaa ah kuwa aan la ogaan karin inta Ton ee kalluun oo ay qaadanayan, sidoo kale dalalkan waxey soo xaalufiyeen badahooda oo wax kalluun ah imika laga heli karin.
Dowladda Soomaaliya ma daba gali karto awoodna uma laha iney la xisaabtanto maraakiibta biyaha Soomaaliya kawada xaalufinta, sidaas darteed dalalkan waxey fiirsanayan kaliya dantooda.
Sidoo kale waxey suuq la’aan ku dhici kartaa kalumeystada Soomaaliyeed ee xeebaha ka jalaabta malayga.